စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ထိပ်တန်းအမှား ၅ ခု | Martech Zone
Marketing Automation တွင်ရှောင်ကြဉ်ရမည့်ထိပ်ဆုံး ၅ ချက်
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 13, 2016 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 14, 2016 အန်သိုနီ Bergs
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ထပ်တလဲလဲရောင်းအားနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်စဉ်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဆက်စပ်သော overheads များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်၎င်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောကုမ္ပဏီများသည်အရောင်းအ ၀ ယ်အလိုအလျောက်၏အကျိုးကျေးဇူးကို ရယူ၍ ၎င်းတို့၏မျိုးဆက်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်းအားထုတ်မှုကိုအားသွင်းနိုင်သည်။
ထက်ပိုပြီး ကုမ္ပဏီများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်နှင့်ကျန်ရှိသော ၇၀% နီးပါးသည်နောက် ၆-၁၂ လအတွင်း၎င်းကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်နေကြသည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်သုံးသောကုမ္ပဏီအနည်းငယ်သည်လိုချင်သောရလဒ်များကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုမှားယွင်းစေတဲ့သာမန်အမှားအယွင်းတချို့ကိုလုပ်မိကြတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Marketing Automation ကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်နေပါကနောက်ဆုံးပေါ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဖြင့်သင်၏အောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းများတိုးပွားစေရန်ဤအမှားများကိုရှောင်ပါ။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်လူမှုရေးမီဒီယာကိရိယာများကဲ့သို့သောအခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာပလက်ဖောင်းများနှင့်မတူဘဲ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လက်ရှိ CRM နှင့်အခြားခြေရာခံသည့်နည်းပညာများနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအားအနီးကပ်ပေါင်းစည်းရန်လိုအပ်သည်။ အလိုအလျောက်သုံးသောကိရိယာများအားလုံးသည်အင်္ဂါရပ်များနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုရှိခြင်းအားဖြင့်တူညီကြသည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီအတော်များများသည်၎င်း၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသာ အခြေခံ၍ ဝယ်ယူသည်။ အကယ်၍ software အသစ်သည်သင်၏ရှိပြီးသား system များနှင့်မကိုက်ညီပါကဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသည့်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အလိုအလျောက်ဆော့ဝဲလ်ကိုအပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီကျယ်ပြန့်သောသုတေသနနှင့်သရုပ်ပြစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ။ သဟဇာတဖြစ်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးနှင့်မည်သည့်အင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပါစေအနည်းငယ်သာအောင်မြင်လိမ့်မည်။
အဆိုပါဒေတာကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်၏အဓိကမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာနှင့်၎င်း၏ထိရောက်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုတို့အပေါ် မူတည်၍ ဆိုးရွားသည့်ရလဒ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အီးမေးလ်လိပ်စာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်နှစ်စဉ်ကုန်ဆုံးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အီးမေးလ် ၁၀,၀၀၀ ရှိသောဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုသည် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းတွင်မှန်ကန်သောအိုင်ဒီ ၅၆၂၅ သာရှိသည်။ မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသောအီးမေးလ်အိုင်ဒီများသည်အီးမေးလ်ဆာဗာ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်တွန်းအားများဖြစ်လာသည်။
အခါအားလျော်စွာ database ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ယန္တရားတစ်ခုကိုထားရှိရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားမရှိခြင်းကြောင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ကိုသင်မဖော်ပြနိုင်ပါ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်သည်အထီးကျန်မှုဖြင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဖောက်သည်များ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်စေသောအရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာများကိုသင်ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်အောင်မြင်စေရန်ဖောက်သည်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုပုံမှန်ထုတ်လုပ်ရန်သိသာထင်ရှားသောအားထုတ်မှုများမပါဘဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါက၎င်းသည်လုံးဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အကြောင်းအရာပါ ၀ င်မှု၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုရန်ကောင်းမွန်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုရှိရန်အရေးကြီးသည်။
ပလက်ဖောင်းအင်္ဂါရပ်များ Sub- အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်မွေးစားသောကုမ္ပဏီများတွင်၊ ၁၀% ကသာဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုအသုံးချသည်။ အလိုအလျောက်အသုံးပြုခြင်း၏နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်မှာထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောအလုပ်များမှလူ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုပါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာန၏လက်စွဲအလုပ်ကိုလျှော့ချမည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သတင်းပို့ခြင်းသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးရှောင်ရှားနိုင်သောအမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သငျသညျစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပေါင်းစပ်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ, အဖွဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုအင်္ဂါရပ်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်လေ့ကျင့်ရေးကိုရှောက်သွားကြောင်းသေချာပါစေ။ အကယ်၍ ရောင်းချသူကကန ဦး လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမပေးပါကသင်၏အဖွဲ့ ၀ င်များသည်ဆော့ဖ်ဝဲ၏အရင်းအမြစ်ပေါ်တယ်တွင်သိသိသာသာအချိန်ဖြုန်းသင့်ပြီးကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကိုနားလည်သင့်သည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည် သို့သော်၎င်း၏လက်ရှိပုံစံတွင်ဒီဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းအားလုံးနီးပါးပါဝင်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နေသော်လည်းသင် ဦး ဆောင်မှုရရန်အီးမေးလ်များကိုသာအားကိုးနေပါကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်အချိန်တန်ပြီ။ လူမှုရေး၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကဲ့သို့သောအခြားမီဒီယာများကို အသုံးချ၍ ဖောက်သည်များ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီအောင်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်။ အီးမေးလ်အပေါ်အလွန်အကျွံမှီခိုမှုသည်ဖောက်သည်များကိုသင်၏ကုမ္ပဏီအားစတင်မုန်းတီးသည့်အထိစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလိုအလျောက်အချိန်နှင့်ငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားသောကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်သည်။ ဒါဟာသင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တစ်ချက်နှိပ်ဆော့ဖ်ဝဲမှော်မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကိရိယာတစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်သင့်စိတ်ကိုမထိမ်းသိမ်းမှီ၊ လက်ရှိအချိန်ဇယားထဲမှစနစ်နှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းရန်သင်အချိန်ယူပါစေ။
ထို့အပြင်သင်၏အဖွဲ့ ၀ င်များကိုအကြောင်းအရာအသစ်များကိုလေ့လာရန်နှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြေရှင်းနည်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုရန်လှုံ့ဆော်ပါ။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်သင်သည်သင်၏သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်နှင့်အညီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်ရောင်းချသူကိုပင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အဆုံးပန်းတိုင်သည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်မှုများမှလူ၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဖယ်ရှားရန်နှင့် ၀ ယ်သူ၏ဘဝသံသရာကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။
Anthony သည်စီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ်သည် တစ်နာရီလျှင်စာရေးဆရာများ သူဖောက်သည်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထိထိရောက်ရောက်ရောင်းဝယ်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားပြီးကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသောနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏စာရွက်ကိုရေးရန်အချိန်သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒမရှိသလော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရေးအသားဝန်ဆောင်မှုကိုကြိုးစားပြီးအလေးချိန်ကိုသင့်ပခုံးပေါ်မှကျစေပါ။ မင်းတို့အတွက်ခြင်္သေ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုနာရီနှင့်ချီစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ဖိစီးမှုများကိုသက်သာစေသည်။
ဒီဇင်ဘာ 14, 2016 မှာ 9: 47 AM
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဆောင်းပါး။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်စနစ်သည် အရွယ်အစားအားလုံးရှိ ကုမ္ပဏီများအတွက်ဖြစ်ကြောင်း သင်ပြောခဲ့သည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် ကြီးမားသောသူများသာ automation tools များမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သည့် ဘုံဒဏ္ဍာရီတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပင်။
15:2016 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 33 တွင်
Maria၊ အကြံပြုချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်းနဲ့ လုံးဝသဘောတူတယ်။ "ဖြိုခွဲပစ်ရမယ်" ဆိုတဲ့ ဘုံဒဏ္ဍာရီပဲ!!!
ဒီဇင်ဘာ 28, 2016 မှာ 5: 31 AM
အကြံပြုချက်များအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နှစ်သစ်မှာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်စနစ်ကို စမ်းသုံးဖို့ စီစဉ်နေပြီး သင်ယူစရာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ GetResponse ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်သနည်း။ ကုမ္ပဏီငယ်များစွာအတွက် ပြဿနာမှာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲအတွက် ဘတ်ဂျက်ငွေဖြစ်သည်။ ထို့နောက် လေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်သော အချိန်ရောက်လာသည်။
ဒီဇင်ဘာ 31, 2016 မှာ 1: 17 AM
မင်္ဂလာပါ အက်ဒ်နာ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း ပလပ်ဖောင်းကို သင်ရွေးချယ်ရာတွင် ကျွန်ုပ်၏အတွေးအမြင်များကို မျှဝေရန် အမှန်တကယ် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ GetResponse သည် ခိုင်မာသောပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် – သို့သော် ၎င်းကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုမည်နှင့် သင့်တွင်မည်သည့်အရင်းအမြစ်များရှိသည်ကို ကြိုတင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြောင်း သေချာရန်လိုသည်။ ဒါတွေအကြောင်းရေးပြီးပြီ။ Marketing Automation ပလပ်ဖောင်းကို ဝယ်ယူရာတွင် အကြောင်းရင်းများ ဒီမှာ။
ဇန်နဝါရီ 24, 2017 မှာ 7: 21 AM
ကောင်းတဲ့ပို့စ်၊ Douglas! စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စနစ်ဆိုင်ရာပလပ်ဖောင်းကို ၀ ယ်ရန်စိတ်ကူးနေသူတိုင်းအတွက်ဖတ်သင့်သည်။ သင့်အတွေ့အကြုံကို မျှဝေပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 24, 2017 မှာ 7: 19 AM
Edna၊ မင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် GetResponse ကို တစ်ခါမှ မသုံးဖူးပါဘူး၊ ဒါကြောင့် တကယ်တော့ ကျွန်တော် ဘာမှ အကြံပေးလို့ မရပါဘူး။ ကုမ္ပဏီငယ်များအတွက် ဘတ်ဂျက်ပြဿနာရှိသော်လည်း ကိစ္စအများစုတွင် ၎င်းသည် ထိုက်တန်သည်ဟု ကျွန်ုပ်သေချာပေါက်ပြောနိုင်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းလည်းရှိသော်လည်း ကိရိယာ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အများစုသည် သင့်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသေချာစေရန်အတွက် အခမဲ့စမ်းသပ်မှုများကို သင့်အား ပေးဆောင်ပါသည်။